I-COVID-19: Sonke sikunye oku, kodwa umhlaba awusebenzi njengalo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-COVID-19: Sonke sikunye oku, kodwa umhlaba awusebenzi njengalo
Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Safety • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UMlawuli Jikelele we-WHO kwi-COVID-19 predicion
Inani losulelo olubhalwe phantsi lwe-COVID-19 ligqithe kwizigidi ezingama-200 kwiveki ephelileyo, kwiinyanga nje ezi-6 emva kokudlula kwizigidi ezili-100. Kweli nqanaba, umhlaba ungadlula kwizigidi ezingama-300 ekuqaleni konyaka ozayo utshilo uMlawuli-Jikelele weWorld Health Organisation (WHO) uTedros Adhanom Ghebreyesus.
Ngaphandle kwento yokuba kukho izitofu ezininzi ezikhoyo, inani lamatyala amatsha kunye nokufa kuyaqhubeka ukonyuka kwihlabathi liphela.
Amanani achaphazeleka ngokukodwa kukungafani kweDelta ngenxa yeempawu zayo ezihanjiswa kakhulu.
Nangona wonke umntu ehlala ethetha ngokufikelela ekukhuseleni umhlambi, uMlawuli weSebe lezoGonyo le-WHO wathi akukho "nombolo yomlingo."
Wongeze ukuba ukuxela kwangaphambili kunye nombhalo osemazantsi ukuba la manani phantse angabalulekanga kwaye nantoni na ukuthintela le ntsholongwane iya kuthatha inyathelo eliqatha.
UTedros uthe, "Sonke sikunye, kodwa umhlaba awusenzi njengalo."
Ukhale ngelithi ngaphandle kwezitofu zokugonya ezikhoyo, inani lamatyala amatsha kunye nokufa kuyaqhubeka nokukhula, ikakhulu kuchaphazeleke kade ngohlobo olwahlukileyo lweDelta kunye neempawu zalo ezosulela kakhulu.
Nangona wonke umntu ehlala ethetha ngokufikelela ekukhuseleni umhlambi, uMlawuli we World Health Organization ISebe lezoGonyo, lathi akukho "nombolo yomlingo." Ucacisile: “Inxulumene ngokwenyani nendlela esosulela ngayo intsholongwane. Into ebisenzeka nge-coronavirus… kukuba njengoko izinto ezikhoyo ziyavela kwaye zinokudluliselwa, oko kuthetha ukuba iqhekeza eliphezulu labantu kufuneka ligonywe ukuze lifezekise inqanaba elithile lokuzikhusela komhlambi. Le yinkalo yokungaqiniseki kwezenzululwazi. ”
Njengomzekelo, imasisi iyosulela kangangokuba i-95% yabemi kufuneka ikhuselekile okanye igonyelwe ukuba ingasasazeki. Ngelixa samkela ngokupheleleyo ukugonyelwa imasisi ukuya kwinqanaba lokuba umzekelo eMelika iintsana zigonyiwe zineenyanga ezili-12 ubudala, ubutsha be-COVID-19 benza ukuba abantu bangabinangqondo okanye boyike okanye bobabini. Baninzi kakhulu abangathembi ukuba abasetyenziswa njengeehagu zeginea ukuvavanya ukusebenza kwale "chiza lintsha lifinyeziweyo." Okwangoku, i Inani lokusweleka kwihlabathi liphela kwi-COVID-19 ifikelele kuma-4,333,094, XNUMX namhlanje.
Kwabo basulelwa yintsholongwane, ithemba lilele kwinto yokuba amagosa e-WHO athe uphando oluthe kratya luyenziwa kunyango lwe-COVID-19. Ulingo olungenakuthelekiswa nanto lwamazwe amaninzi olubizwa ngokuba yiSolidarity Plus luya kujonga ukusebenza kwamachiza ama-3 amatsha kumazwe angama-52.